Aragtida Shirkadda - Anshun AKF Medical Technology Co., Ltd.
Maaddaama uu yahay hoggaamiye ku saabsan warshadaha soosaarida mawduucyada, AKF wuxuu ujeedkiisu yahay inuu noqdo mid ka mid ah noocyada ugu saameynta badan dhinaca alaabada caafimaadka isla markaana macaamiisha siiyaan tikniyoolajiyadda iyo adeegyada ugu fiican. Waxaan isha ku haynaa inaan kulaxiriirno adoo kahadlaya sheyga caalamiga ah isla markaana kawadahadalidoono isbedelka horumarka ugufiican ee warshadaha iyo xalalka udambeeya faafa.
AKF wuxuu diirada saari doonaa busi-nadeeda ugu weyn ee ku saabsan berrinka waji-ka-ilaalin-tuurista, u abuuri kara qiimo gaar ah macaamiisha xirfadleyda ah ee leh xalalka nidaamka iyo adeegyada kale ee qiimaha lagu daro, waxayna noqoneysaa xubin aan la beddeli karin oo ka mid ah shirkadaha caalamiga ah ee sumadda calaamadaha ee warshadaha sahayda caafimaadka. Waxaan u qaadaneynaa fikradda ah xallinta dhibaatooyinka isticmaaleyaasha iyo ka dhigista kuwa ku habboon.
Baacsiga AKF's waa "khibrad macmiil". isfahamka ugu fiican iyo la kulanka baahida macaamiisha goobta aan dan ka lahayn. waxaan si adag u aaminsanahay in kaliya awooda qoto dheer ee xirfadeed ay ulti-mately ku guuleysan karto aaminaada muddada-dheer ee macaamiisha berrinka takhasuska leh.
- Himilada HIIGSIGA -
Sida aynu wada ogsoonahay, waxyeelada deegaanka ayaa keentay wasakhaynta hawada iyo bakteeriyada. Tirada dadka sanad kasta u dhinta cudurada neef mareenka iyo infekshinka xiidmaha ayaa ka badan 20 milyan adduunka. Wajiyadaha waxay noqdeen wax soo saar lama huraan u ah cudurkan faafa. Xaaladdan oo kale, waxay door muhiim ah ka ciyaartay la dagaallanka 2019-coronavirus. Maaskarada la tuuri karo ee AKF iyo maaskaro loo yaqaan 'kn95 mask' ayaa ah laba dariiqo oo waaweyn oo si wax ku ool ah looga jaro dhaawaca caafimaadka dadka ee ay sababaan bakteeriyada, fayrasyada iyo wasakhda hawada iyada oo loo marayo duulaanka maqaarka iyo neefsashada neefsashada. Iyagu waa ilaaliyayaasha caafimaadka aadanaha.
Shirkaddu waxay bilowday inay soo gasho warshadaha maaskarada marxaladda hore ee cudurrada faafa, waxayna si dhakhso leh ugu kaceen duruufo aad u adag. Waqtigan xaadirka ah, maaskaro taxane ah oo loo yaqaan 'AKF' ayaa suuqyada soo galayay iyagoo wata tiro aad u tiro badan, iyaga oo u soo bandhigaya alaab aad u wanaagsan dadweynaha si ay isaga caabiyaan aafada una ilaaliyaan caafimaadka.
AKF wuxuu diiradda saarayaa baahiyaha iyo caqabadaha macaamiisha, isagoo siinaya alaabooyin caafimaad oo takhasus gaar ah u leh macaamiisha iyo xalka macaamiisheena iyada oo loo marayo hal-abuurnimo iswaafaqsan iyo jawaab deg deg ah, dhammaantood waxay u suurtagelinayaan macaamiisha inay la kulmaan wada-shaqeyn hufan oo lagu kalsoonaan karo.
AKF waxay u qaadataa baahida macaamiisha mas'uuliyadeeda, waxayna si isdaba joog ah u wanaajisaa takhasuska iyada oo loo marayo maalgashiga R & D, fahamka caqabadaha ay la kulmaan cusbitaalada aaga isgaarsiinta xirfadeed si isdaba joog ah iyo u soo bandhigida go'aammada bartilmaameedyada, iyo noqoshada khabiir xallin xirfad leh.